लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने तीन दर्जन दल कारबाहीमा - Everest Dainik - News from Nepal
लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने तीन दर्जन दल कारबाहीमा
काठमाडौं,माघ १७ । कानुनले तोकेको समयभित्र वार्षिक लेखा परीक्षणको प्रतिवेदन निर्वाचन आयोगमा नबुझाउने राजनीतिक दलले निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने भएका छन् । निर्वाचन आयोगमा हाल एक सय ११ वटा राजनीतिक दल दर्ता भए पनि वार्षिक लेखा परीक्षणको प्रतिवेदन आयोगमा बुझाउने दलको सङ्ख्या भने न्यून छ ।
याे पनि पढ्नुस ७७ कि ७५ जिल्ला ? संविधानमै अस्पष्ट
व्यवस्थापिका–संसदमा रहेका र नरहेका गरी झण्डै तीन दर्जन दलले समयमै विवरण नबुझाउँदा प्रत्येक दलले एक–एक सय रुपियाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने भएको छ । तीन वर्षसम्म जरिवाना नतिर्ने दल खारेज गर्ने हालको कानुनी व्यवस्था छ । जरिवानाको रकम ज्यादै न्यून हुँदा हेपाहा प्रवृत्ति हावी भएको देखिन्छ ।
याे पनि पढ्नुस स्पष्टीकरण सोध्ने कारबाही नगर्ने आयोगकाे पन्छिने मेलाे ? यस्ता छन् उजुरी